Vanorarama neHutachiwana hweHIV/AIDS maMutare Vochemachema neKutengeserwa Mishonga Inovabatsira
Mishonga iyi inonzi iri kutengeswa madhora mashanu emari yekuAmerica.
Vanorarama nehutachiwana hweHIV/AIDS maMutare vari kuchema chema nenyaya yekutengeserwa mishonga inovabatsira iyo vanofanira kunge vachipihwa pachena. Mishong iri kutengeswa muzvipatara zvekanzuru nemari inosvika madhora mashanu ekuAmerica.
Mumwe ari kuchema chema nekutengeserwa mishonga mukuru wesangano revanorarama nehutachiwana hweHIV AIDS uye vari mukuru wesangano reFamily Aids Support Organisation, FASO VaCasper Pound vanoti mari iyi yakatowedzerwa zvekare gore rino.
"Tinoti tiri kuona paine ka-fund raising kari kuitwa nevekanzuru panyaya yemishonga yavari kutitengesera muzvipatara zvekanzuru,asi isu tichiziva kuti tinofanirwa kunge tichipihwa mahara. Mumashure vaitibhadharisa ma-$3 asiiye zvino vave kuda ma$5 pamunhu kuti upihwe mushonga."
VaPound vanoti vanotarisira kuti mishonga iyi inge ichipihwa pachena muzvipatara sezvo inenge yakabhadharwa kare nemasangano akazvimirira oga.
"Ishuviro yedu kuti hurumende kana vamwe vane masimba vatibatsire kuti tiwanirwe mishonga iyi pachena, sezvo $5 iri mari refu isingawanikwe nevakawanda sezvovamwe vachitoshaya kana yetransport yekupinda mugutakuzotora mishonga yacho."
Mutauriri wesangano reNational Aids Council kana kuti NAC, Amai Madeline Dube vanoti mishonga iyi haisungirwi kunge ichibhadhariswa muzvipatara sezviri kuitika.
"Isu seNAC tinoziva kuti mishonga iyi tinoipihwa pachena nema-partners edusaka inosungirwa zvakare kuti ipihwe vanokodzera mahara, kwete zvekutengeswa sezvatirikunzwa izvi. Pangatove maybe ne-administration costs chete kwete kuti kutengeswa kwemishonga iyi."
Izvi zvatsinhirwa nemunyori mukuru mudunhu reManicaland vachishandira muhofisi yegurukota redunhu rino VaEdgar Seenza vati havo pane mari yemuripo ingangobhadharwa ingatove yekubata basa iri kwete kutengesa mishonga.
"Tichada kutanga tanzwa kubva kukanzuru kuti vari kuzvifambisa seyi asi sekuziva kwangu mishonga iyi inofanirwa kunge ichipgoverwa pachena pasina zvekubhadhara. Tichagara pasi nevekukanzuru kuti tinzwisise zviri kuitikapamishonga iyi ye-ART."
Meya weguta reMutare VaSimon Chabuka vanoti havana ruzivo nezvemari iri kunzi iri kubhadhariswa vanhu iyi.
VaChabuka vanoti vachada kutanga vaongorora mafambisirwo ari kuitwa kubazi rezvehutano mukanzuru sezvo vachangobva mukusarudzwa.